मिडियाले नबुझिदिंदा नरमाइलो लाग्छ | कोरोना कहर | कोरोनाको बेला..
सेती प्रादेशिक अस्पतालमा मेडिकल टेक्नोलोजिस्ट भएर तीन वर्षदेखि काम गरिराखेकी छु । सुरुमा एचआईभी बिरामीमा भाइरल लोड कति छ भनेर पीसीआर चलाउँथेँ ।
कोरोनाको त्रास बढेपछि हाम्रोमा पनि पीसीआर सेटअप भयो । त्यतिखेर सेती प्रादेशिक अस्पतालमा टेक्नोलोजिस्ट धेरै नभएकाले म एचआईभी भाइरल लोड युनिटबाट कोरोना परीक्षणका लागि आएँ । त्यतिबेला हामी चार जनाले गर्ने गरेका थियौँ पीसीआर चलाउने काम । कोरोना एचआईभी जस्तो नभएर भयावह रहेछ ।
सुरुमा हामीलाई चाहिने खालको पीसीआर मसिन भएन । धनगढीको भेटेनरीमा हामीलाई चाहिने, मज्जाको सेटअप रहेछ । २०७७ वैशाख २ गते हामी भेटेनरीको ल्याबमा ट्रान्सफर भएर आयौँ । अहिलेसम्म हामीले यहीँबाटै कोरोनाको पीसीआर टेष्ट गरिराखेका छौं । अहिले ल्याबमा हामी नौ जना छौं ।
नेपालमा कोरोना पोजेटिभ केस नभएका बेला हामीलाई केही डर लागेको थिएन तर पोजेटिभ केस भेटिएपछि एकदमै डर लाग्यो । हामीलाई डर लाग्नु स्वाभाविक पनि थियो । अस्पताल जानै पर्यो । यस्तो बेला आफ्नो कर्तव्यबाट हट्नु पनि कसरी ? सासूआमा ७५ वर्ष नाघ्नुभएको छ । मेरो सानो बाबु साढे २ वर्षको छ । मलाई घरमा बस्न खतरा हुन्छ जस्तो लाग्यो । बाबुलाई दूध खुवाउनुपर्ने भएकाले बाहिर बस्न पनि नमिल्ने । क्वारेन्टाइनमा बस्न पनि नमिल्ने । पहिले घरमा कहिलेकाहीं कोही नहुँदा बाबुलाई आफैसँग लिएर आउने गर्थें ।
मेरो श्रीमान् सेती अस्पतालमा डाक्टर हुनुहुन्छ । मेरो श्रीमान्लाई पनि डर त छ । तर पनि हामी दुवै एकअर्कालाई सपोर्ट गर्छौं । साथै हाम्रो घरपरिवारले पनि साथ दिइराख्नु भएको छ । पहिलादेखि नै हामी दुवै मेडिकल क्षेत्रमा काम गर्ने भएर पनि होला घरकाले त्यस्तो त केही भन्नु हुन्न । सबैबाट सहयोग पाएकाले म कामबाट पछि हटेकी छैन ।
डर आफ्नो ठाउँमा छ । नयाँ अनुभव अनि नयाँ अवसर पनि प्राप्त भएको छ । हामीले न गरे कसले गर्ने ? आफूले पढेकै काम गर्नुपर्‍यो । पढ्दाखेरि पीसीआरको बारेमा पढेको मात्रै थिएँ । अहिले पूरै व्यावहारिक ज्ञान हासिल गर्न पाएकी छु ।
पहिलोपल्ट हातमा पीपीई पर्दा जिम्मेवारी बढेको महसुस भएको थियो । त्यो लगाएर ल्याबमा छिर्दा चाहिं यो काम गर्न सक्छु भन्ने आत्मबल बढ्यो । एक प्रकारको गर्व महसुस गरेँ । ल्याबमा बिहान र बेलुकाको सिफ्ट हुन्छ । कहिले बिहान त कहिले बेलुकाको सिफ्ट पर्छ मेरो । कहिले घर फर्कंदा रातिको १० पनि बज्छ । बाबुलाई उठाएर एकपटक दूध भने खुवाइहाल्छु ।
ल्याबमा एक पटकमा हामी तीन जना काम गर्ने गर्छौं । धेरै ध्यान दिएर काम गर्छौं । हामी सावधान पनि छौँ । यसअघि यति धेरै सावधान भएका थिएनौं । त्यसले गर्दा पनि अहिलेसम्म गल्ती भएको छैन, भविष्यमा पनि नहोला ।
अहिले गर्मी छ । पीपीई लगाउँदा निस्सासिइन्छ । त्यति बानी नपरेर पनि होला कहिलेकाहीं त आफ्नै सासले गर्दा बाफ भरिन्छ । आँखाभरि बादलै बादल लागे जस्तो हुन्छ । कहिलेकाहीं त आफैलाई हाँस उठ्छ ।
मेडिकल ल्याब भन्ने बित्तिकै मान्छेहरु प्रायः दिसापिसाब रगत परीक्षण हुने ठाउँ भन्ने ठान्छन् । अहिले कोरोनाले गर्दा ल्याबको महत्व अलिकति भए पनि बढेको छ । ल्याबको मान्छेलाई हेर्न दृष्टिकोण पनि फेरिएको छ । अलि राम्रो नजरले हेर्ने गर्छन् हामीलाई । पहिला त अस्पताल व्यवस्थापनले पनि हामीलाई सानो ठाउँ दिन्थ्यो । कतै त ल्याबलाई भर्‍याङमुनि राखिन्थ्यो, जुन ठाउँ अरू काममा आएको छैन त्यहाँ राख्ने गरिन्थ्यो ।
अरूले आफूलाई दिसापिसाब र रगत चेक गर्ने मान्छे भन्दा मलाई कहिलेकाहीं त यो विषय किन पढेछु जस्तो हुन्थ्यो । कसैले के पढेको भनेर सोध्दा ल्याबसँग सम्बन्धित विषय पढेको भन्दा मानिसले बुभ्दैनथे । उहनीहरुलाई बुझाउने गर्थें । पढेलेखेका मान्छेहरुले नै नबुझिदिंदा पनि यो विषय बेकार पढेछु जस्तो लाग्थ्यो ।
अहिले ल्याबको महत्व बढेको छ । ल्याब राम्रो भए रिपोर्ट पनि राम्रो आउँछ भन्ने कुरा मानिसले बुझेका छन् । भन्न त नहुने हो तर कोरोनाले गर्दा ल्याब क्षेत्रलाई फाइदै पुगेको छ । अहिले हाम्रो ल्याबमा रगत, दिसापिसाब जाँच मात्रै होइन त्यसबाहेक पीसीआर मेसिन पनि सञ्चालन छ । आफूले ल्याब पढेर राम्रो गरेकी रहेछु भनेर पहिलो पटक खुसी लागेको छ ।
जनरल ल्याब र कोरोना परीक्षण ल्याबमा काम गर्दा फरक हुने रहेछ । हुन त मैले एचआईभी संक्रमण परीक्षणका लागि पीसीआर मेसिन चलाउँथेँ । त्यो अटोमेटिक थियो । अहिले सबै हातले चलाउनुपर्छ । कहिलेकाहीं संक्रमण हुने हो कि भनेर डर लाग्छ । मलाई केही भएका खण्डमा बाबुको भविष्य के होला भनेर पीर लाग्छ । सावधान भएर काम गर्छु भन्दाभन्दै कहिलेकाहीं गल्ती हुने हो कि भनेर बच्चाको याद आउँछ । यो काम बेकार गरे जस्तो पनि लाग्छ । तर पनि जिम्मेवारी लिइसकेपछि काम गर्नै पर्‍यो । त्यसैले मनमा उत्साह र दृढ विश्वासका साथ काम गरिरहेकी छु ।
पहिलो पटक धनगढीमा कोरोना पोजेटिभ केस देखिंदा मेरो मम्मी र बाबा (माइतीघरमा) आत्तिनु भएको थियो । मलाई फोन गरेर भोलि बिहानै एक पटक जसरी हुन्छ घर आइज भन्नुभयो । मैले फोनमै कुरा गरौँ भन्दा मान्नु भएन । भोलिपल्ट के रहेछ त भनेर माइतीघर पुगेँ । पुग्नै बित्तिकै मम्मीले रुँदै ‘जागिर छोड्दे, केही गर्नु पर्दैन, हामी रातभरि सुत्न सकेका छैनौं’ भन्नुभयो । बाबा पनि रुनुभयो । आमा बुबाको मन न हो ।
पछि सम्झाएँ — त्यस्तो केही हुँदैन, हामीले बिरामीलाई छुनु पर्दैन, सुरक्षा साम्रगी लगाएको हुन्छ भनेर । बल्लबल्ल मान्नुभयो ।
त्यपछि पनि समयसमयमा फोन गरेर मम्मी बाबाले के कस्तो छ भनेर मेरो चिन्ता गरिराख्नुहुन्थ्यो । मलाई केही भइहाल्यो भने बाबुको भविष्य के होला भन्ने चिन्ता पर्थ्यो उहाँहरुलाई । त्यति बेला भेट हुँदा देखिने पहिलो प्रतिक्रिया नै आँखाभरि आँसु हुन्थ्यो । अहिले भने सबैलाई बानी परिसक्यो । अहिले फोनमा कुरा हुँदा पनि पहिलेको जस्तो आत्तिनु हुँदैन । कहिलेकाहीं माइत पनि जान्छु । बाबुलाई दिनभरि त्यहाँ छोडिदिन्छु ।
हुन त पीपीई लगाए पनि विदेशमा कति स्वास्थ्य कर्मचारी कोरोना लागेर मरेका पनि छन् । यस्तो कुराले मनमा डर त लाग्छ नै । आफूसँग अलि नजिक भएकाहरु चाहिँ यस्तो काम गर्दा कस्तो डर लाग्ने है भन्छन् । तर चित्त बुझाउनका लागि आफू सुरक्षित छु भन्ने ठान्छु । निराश हुन्नँ ।
काम गर्दा आफ्नो टिमबाट राम्रै सहयोग पाएकी छु । अस्पतालमा पनि अरु कर्मचारीहरुले राम्रो गरिराखेकी छौ भन्नुहुन्छ । धेरै साथीहरुले ‘यु ह्याभ डन अ गे्रट जब’ भनेर म्यासेज पठाउँछन् । त्यो देख्दा धेरै खुसी लाग्छ । काम गर्ने हौसला बढछ ।
एकदिन भने मलाई एकदमै विरक्त लागेको थियो । सुरुमा हाम्रोमा नेगेटिभ केस आइरहेका थिए । तर केही स्थानीय मिडियामा धनगढीको पीसीआर परीक्षणमा सबै नेगेटिभ आयो, परीक्षण प्रभावकारी भएन, काम गर्ने मान्छे कुशल छैनन् कि क्या हो ? राम्ररी परीक्षण गरेनन् भन्ने जस्ता समाचार आए ।
त्यस्तो समाचार आउँदा नराम्रो लाग्यो । काम गर्न मनै नलाग्ने । मिडिया भन्दैमा जे पनि प्रसार त गर्न पाइन्न नि । तथ्य बुझाउनुपर्छ नि । यहाँ हामी मरीमरी काम गरिराखेका छौं आफ्नो घरपरिवार छोडेर । कति जना साथीहरु होटेलमा बसिराख्नुभएको छ । डडेलधुरा र काठमाडौंबाट आएर याहाँ काम गरिराख्नुभएको छ । यस्तोमा झूटा खबर आउँदा नरमाइलो लाग्ने । नेगेटिभ आउनु त राम्रो हो नि झन् । हामी ल्याबमा परीक्षण गर्दा हे भगवान् नेगेटिभ आओस् भनेर प्रार्थना गर्ने गर्छौं । यहाँ मिडिया भने पोजेटिभ किन आएन भन्छन् । अच्चम लाग्छ !
अहिले पनि मान्छेहरु विदेशबाट आफ्नो घर फर्किरहेका छन् । लकडाउनमा सिमानाबाट मान्छेहरु भित्रिएका बेला र्‍यापिड टेष्ट गरेको भए त्यसले कभर गर्थ्यो होला । अनि लकडाउन पनि चाँडै खुकुलो हुन्थ्यो होला । अहिले कोरोना संक्रमित दिनदिनै बढिरहेका छन् तर लकडाउन भने खुकुलो पारिएको छ ।
हुन त लकडाउन थपेर मात्रै पनि भएन । मानिसले खानु परिहाल्यो । हुनेखानेले त खानेहकुरा राखेका होलान् । केही नहुनेको त बिजोगै छ । सबैलाई अप्ठेरो छ । मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा सानो कुरा पनि ठूलो भइरहेकाले मान्छेहरु त्रसित छन् । अब आफै सावधान भएर काम गर्नुपर्छ, त्रसित नभई बस्नुपर्छ । कोरोनालाई जित्न आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुपर्छ, आत्मबल कहिल्यै कम गर्नु हुन्न ।
यो कथा कञ्चन विष्टसंग गरीएको कुराकानीमा रहेर अनुषा स्वाँरले लेख्नु भएको हो ।